Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọsọ egwuregwu ụwa: Torrence Racing sonyeere Toyota Team
Torrence Racing ga -esonyere Team Toyota malite na oge 2022 NHRA Camping World Drag Racing Series. Mgbakwunye nke mbọ otu abụọ nke Torrence Racing na-agbasa mmekorita otu Toyota ịgụnye dragọn Top Top ise na ụgbọ ala ọchị abụọ.
"Torrence Racing bụ onye ndu na asọmpi NHRA, anyị na -atụkwa anya iwebata Steve na Billy n'ime ezinụlọ Toyota na 2022," Paul Doleshal, onye njikwa otu, Motorsports na Assets, Toyota Motor North America (TMNA) kwuru. “Anyị nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala dị ịtụnanya na ndị otu otu na mpaghara NHRA. Mgbakwunye nke Steve na Billy Torrence ga -akwalite usoro ahụ pụrụ iche. ”
Torrence Racing abụrụla ike kachasị na NHRA n'afọ ndị na -adịbeghị anya. Steve agbagoro na mmeri iri anọ na iteghete na ọrụ 49 na asọmpi Top Fuel atọ. Oge a, Steve emeriela ugboro itoolu ma bụrụ onye isi ihe ugbu a. Nna ya, Billy, meriri ugboro abụọ n'afọ a yana ugboro asatọ n'ọrụ ya. N'agbanyeghị na-arụ ọrụ oge nwa oge, Billy bụ onye nke ise ugbu a na ọkwa ọkwa niile.
Toyota na -enye ndị otu NHRA ụgbọ ala na -adọkpụ, yana injinịa, teknụzụ na nkwado ụzọ site na TRD (Toyota Racing Development). Na mgbakwunye na Torrence Racing, Toyota ga-aga n'ihu na-akwado ndị otu Antron Brown guzobere ọhụrụ-AB Motorsports, DC Motorsports na Kalitta Motorsports 'mbọ otu atọ na 2022.
Steve Torrence kwuru, "A gọziri m inwe ọtụtụ ihe ịga nke ọma n'ọrụ NHRA m, mana ọ dị m ka mmekọrịta ọhụrụ a na Toyota na TRD ga -emeziwanye ihe Torrence Racing nwere ike ime na egwu ahụ." “Ahụla m n'onwe m na ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị otu jikọtara Toyota abụghị naanị akụkụ nke akwụkwọ ndekọ aha ha, kama ọ bụ akụkụ nke ezinụlọ. Ha bụ ndị nrụpụta pụrụ iche na -ebute ndị mmadụ ụzọ, nke ahụ bụ ụdị mmekorita nke ndị otu anyị nwere obi ụtọ ịbụ akụkụ nke ịmalite oge ọzọ. "
Steve na Billy Torrence sonye na ahịrị ọkwọ ụgbọ ala nke Toyota nke gụnyere onye mmeri NHRA Top Fuel Brown ugboro atọ, onye mmeri US Nationals Alexis DeJoria, onye mmeri asọmpi 49 oge Doug Kalitta, onye mmeri 2013 Top Fuel Shawn Langdon na onye mmeri 2018 Funny Car JR Todd.
Toyota na -eme mmemme oge nke iri abụọ na NHRA n'afọ a. Ndị ọkwọ ụgbọ ala Toyota emeriela 20 Top Fuel na 137 Funny Car race yana isii Top Fuel na asọmpi egwuregwu atọ na -atọ ọchị n'oge ọ nọ n'usoro.